Doorashada lix kursi oo ka tirsan G/Shacabka oo maanta ka dhaceysa KISMAAYO - Caasimada Online
Home Warar Doorashada lix kursi oo ka tirsan G/Shacabka oo maanta ka dhaceysa KISMAAYO
Doorashada lix kursi oo ka tirsan G/Shacabka oo maanta ka dhaceysa KISMAAYO
Kismaayo (Caasimada Online) – Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhaceysa doorashada lix kursi oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka ee ka imaanaya dhinaca dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
Sida uu guddiga doorashada maamulkaasi shaaciyey kuraastan afar ka mid ah waxaa u tartamaya rag, halka labada kale loo xiray dumarka si lool ilaaliyo qoondada haweenka.
Musharixiinta ayaa marka hore la siin doona hadal jeedin, iyada oo kadib la guda-galayo tartanka doorashada iyo codeynta, waxaana kursigii dooranaya illaa 101 ergo ah.
Kuraasta loo tartamaya ayaa kala ah HOP#082, HOP#108, HOP#113, HOP#134, HOP#203 iyo HOP#217, kuwaas oo la filayo in saacaha soo socda la qabto doorashadooda.
Dhinaca kale guddiga doorashada ee Jubbaland ayaa ballan-qaaday in uu qabanayo doorasho tartan furan oo si siman loogu qabanayo musharixiinta xil-doonka ah.
Waa kuraastii ugu horreysay ee ay Jubbaland qabaneyso doorashadooda, iyada oo sidaas ku noqoneyso maamulkii saddexaad ee guda-gala doorashada baarlamaanka Soomaaliya.